Kedu ngwá ahịa Amazon kacha mma kachasị mma?
Ndị ahịa Amazon niile bara ọgaranya na-eji ohere dị iche iche nke nyocha na ngwaọrụ nyocha iji mepụta mgbasa ozi kachasị mma na ịkwọ ụgbọala na ndepụta ngwaahịa. Amazon na-eche banyere uru gị ma na-enye gị ụfọdụ ngwá ọrụ bụ isi iji jikwaa ngwaahịa gị. Otú ọ dị, mmemme Amazon ndị a enweghị ike inyere gị aka n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ihe ezi uche dị na iji ngwaahịa ndị ọzọ Amazon na-ere ere iji dọtakwuo ndị ahịa nwere ike ịbawanye ego.
Ngwaahịa ndị na-ere ahịa Amazon nwere ike imeju mkpa niile nke azụmahịa gị, na-amalite site n'ịchọpụta okporo ụzọ na-emepụta ọchụchọ na ịmecha na ịzụta ọnụahịa ịzụta igbe.Ya mere, ihe niile ị chọrọ bụ ịghọta ihe niile nhọrọ gị na ịchọta ezigbo ngwakọta ọrụ iji rụọ ọrụ nke oma na ijikwa arụmọrụ azụmahịa Amazon gị.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụfọdụ ngwaahịa ndị na-ere ahịa Amazon bụ ndị e mere iji mee ka okporo ụzọ ndị ọzọ gbanwee gaa na Amazon ma depụta ahịa Amazon dị elu.
Ngwaahịa Amazon maka ire ere
Ngwaọrụ maka ndị ga-achọ inweta ngwa ngwa ngwa ngwa na Amazon
Dị ka Amazon na-ere ere Central na Sales Central, ndị ahịa nwere ike ịnweta ịkwụ ụgwọ ha karịa ugboro abụọ n'ọnwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ imezigharị usoro a (n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ịchọrọ ya), ịkwesịrị imebe otu n'ime ngwaọrụ ịkwụ ụgwọ. Ha na-enyere ndị na-ere ahịa Amazon aka ịkwụ ụgwọ karịa ugboro abụọ n'ọnwa. N'iji ngwaọrụ ndị a, ị nwere ike inweta ego gị kwa ụbọchị. Ụdị ọrụ a ka a maara dị ka ịnye ọrụ. Ngwá ọrụ na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa na-akwụ ndị na-ere ahịa Amazon kwa ụbọchị dabeere na ahịa ha. Ngwaọrụ ndị a na-enweta ego kpọmkwem site na Amazon maka oge ịkwụ ụgwọ oge niile.
Ịmepụta ihe ndị dị otú ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịmalite ịzụ ahịa gị ngwa ngwa n'ihi ohere ịnweta ego gị n'oge ọ bụla ị chọrọ ya. Ọ ga-enye gị ohere ịchọrọ onwe gị na Amazon ma tinye ego na mmepe azụmahịa gị. Ọzọkwa, ị ga-enwe ike ịchịkwa ego gị iji kwụọ ụgwọ gị na oge gị, ọ bụghị Amazon.
Ngwaọrụ a na-akwụ ụgwọ mma nke ga-akwụ ụgwọ azụmahịa gị dị ka Amazon. Ngwaọrụ a na-enye ndị na-ere ákwà n 'ụbọchị ọ bụla nha. Ọnụ ọgụgụ mmalite nke ọnwa bụ 2% nke ahịa Amazon.
Ngwaọrụ maka ndị chọrọ ijikwa isiokwu na nchọpụta ngwaahịa
Ọ bụrụ na ị na-achọ ohere ngwaahịa na Amazon, isiokwu na nchọpụta ngwaahịa ngwá ọrụ ga-enyere gị aka. N'iji ngwaọrụ ndị dị otú ahụ eme ihe, ị ga-enwe ike ịbanye n'ime nyocha ọchụchọ Amazon iji chọpụta ụdị ahịa ndị ahịa na-eji achọ ngwaahịa gị. Ị ga-enwe ike ịlele nyocha ọchụchọ nke isiokwu ọ bụla ahọpụtara ma ọ bụ akara okwu. Ị nwekwara ike iji ụyọkọ ego iji chọpụta ego niile ị ga-akwụ na Amazon.
Iji chọpụta ọchụchọ dị mkpa na ngwaahịa ndị ga - ewetara gị nnukwu ego nkwụnye ego na Amazon, ịkwesịrị ịmepụta nnukwu nnyocha nyocha na nkwụsị nke mgbasa ozi kachasị mma Amazon.Usoro ọchụchọ dị elu ga-enyere gị aka ịmepụta ahịa-ụgbọala Amazon SEO ngwaahịa ndepụta ma merie ahịa ọzọ na Amazon. Imirikiti ọrụ nyocha nke ihe omuma nwere ike inye gị nyocha data nyocha, inye ndị gụrụ akwụkwọ na ọkwa na uru ha.
E nwere ọtụtụ amaokwu Amazon na ngwá ọrụ nchọpụta ngwaahịa na weebụ. Ịkwesịrị ịlele ndị kasị mma n'ime ha ma chọpụta ihe kachasị mma maka azụmahịa gị.
Akụkụ bụ àgwà ịchọpụta ihe Amazon nke na-achọ ịchọta usoro ọchụchọ na ngwaahịa Amazon.Ọ na-enyere aka ịchọpụta ahịa na-achọ ịchọta ụgbọala na ihe dị oké ọnụ ahịa na nchịkọta Google Chrome. Ihe ngosi gosiri usoro ọchụchọ kachasị elu maka ngwaahịa iji nyere gị aka ịpụ na Amazon. Otu uru ọzọ bụ na ị nwere ike ịhụ ihe na-akwọ ahịa gị.
Iji nyochaa ngwa ngwa nyocha, ị ga-enwe ike ịghọta uru gị nwere maka ihe ị ga-ere ahịa. Ị nwere ike ịnweta ego, ego, na ahịa ahịa maka ngwaahịa ọ bụla na Amazon. Ihe omuma a nile nke Akwukwo a choro ga enyere gi aka imebi gi. Ị nwere ike ịchọta ihe niile ị chọpụtara na faịlụ CSV maka nyochaa ọzọ.
Ọnụahịa mmalite site na ọnwa bụ $ 32. 50.
Sonar bụ ngwá ọrụ nyocha Amazon n'efu nke dabeere na ndị nchọpụta niile na ezigbo data sitere na ajụjụ ọchụchọ ndị ahịa. Sonar jiri algọridim dị mgbagwoju anya chọpụta ihe ndị ahịa gị na-achọ na Amazon ma chịkọta data ndị a na nchekwa data ha. N'iji ya tụnyere ngwá ọrụ ndị ọzọ, Sonar na-enye ndị ahịa ohere ka ha dị ka ASIN nyochagharị nyocha, gbasaa mbọ chọpụta okwu ọchụchọ ndị ahụ, ọchụchọ Amazon nke ọ bụla na mkpụrụokwu ọ bụla, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ bara uru.
Ọ bara uru ikwu na Sonar gụnyere naanị usoro ọchụchọ nke ASIN bụ ogo na ibe mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ.
Ọ bụ n'efu Chrome nchọgharị ngwa.
Ngwaọrụ maka ndị na-achọ ọrụ nlekọta nchịkọta ihe
E nwere ngwá ọrụ Amazon nke na-enye ndị ahịa aka ijikwa ndepụta ngwaahịa na Ndepụta Ngwaahịa na-abụghị Onye Ahịa Oghere dị n'etiti. Ngwa ndị a na-ere ahịa jikọtara ngwaahịa Amazon ngwaahịa na nchekwa data mpụga. Ịmepụta ihe ndị a ndị ahịa na-ere ahịa nwere ike ịgbakwunye ma gbanwee ngwaahịa, melite ndepụta, nchịkọta egwu, gbanwee ọnụahịa ha, na ọbụna rụọ ọrụ ndị ọzọ. Ụfọdụ ngwá ọrụ ntanetị Amazon nwere ike ịmekọrịta data ị na-echekwa na ọwa ahịa ndị ọzọ. Ọ na-enye gị ohere iji ree ngwaahịa gị niile n'ọtụtụ ahịa. Ọzọkwa, ị nwere ike ijikwa iwu na mbupu maka ọwa ahịa niile.
Otutu n'ime ndi oru nlekota oru nlekota oru a na-enye atumatu ugwo ahia. Ya mere, ha nwere ike ịkwado ndị ahịa ahịa ọtụtụ ahịa.
Ndị a na-ere ngwá ọrụ gụnyere SellerEngine Plus ($ 49. 95) - nye ngwaọrụ zuru oke, JoeLister ($ 29) - ma ndị Amazon ma eBay ere; Vendio ($ 99) - rụọ ọrụ zuru oke maka ndị na-ere Ahịa na ndị ọzọ ahịa nhazi; SellBrite ($ 183) - uwe maka ndị na-ere ahịa na nnukwu ụlọ ahịa na Amazon na ebe ndị ọzọ a ma ama Source .